Filtrer les éléments par date : vendredi, 19 octobre 2018
vendredi, 19 octobre 2018 22:54
Krizy politika : Miantso vonjy amin'ny vahiny ny PM
Hiaona amin'ireo masohivoho vahiny ny Praiminisitra rahampitso sabotsy 20 oktobra amin'ny 4ora tolakandro.
vendredi, 19 octobre 2018 19:32
Rencontre Candidats - CENI
vendredi, 19 octobre 2018 19:22
Kitra-Ligy V7V: Voafidy ho filoha i Andriano Giscard
Tontosa androany ny fifidianana filohan'ny ligin'ny baolina kitra Vatovavy Fitovinany (V7V).
Voafidy ho filoha i Andriano Giscard, Ben'ny Tanànan'i Manakara. Vato efatra no azony. Filohan'ny seksiona efatra no mpifidy, izay samy nametraka fitokisana taminy.
Telo ireo kandida nifaninana ho amin'ity toeran'ny filohan'ny ligy V7V ity.
vendredi, 19 octobre 2018 19:04
Antsirabe: Voasambotra indray ireo mpamerin-keloka amin'ny aferan-drongony
Olona 13 no natolotra ny Fampanoavana noho ny fahatratrarana rongony teto Antsirabe.
Toerana efa malaza amin’ny aferan-drongony moa iny Atsimontsena iny ka nisy hetsika manokana nataon’ny Polisim-pirenena Antsirabe ka nahatratrarana ireto olona ireto niaraka tamin’ny rongony 2 kilao sy sasany izay efa vita fono hamidy ny sasany.
Nisy tamin’ireo olona ireo no mpivarotra sy mpanjifa ary nisy mihitsy ny tratra teo ampifohana izany zava-mahadomelina izany.
Nambaran’ny teo anivon’ny Polisim-pirenena fa isan’ny mitarika ny tsy fandriampahalemana ny fiparitahan’itony zava-mahadomelina itony ka izany no antony nanaovana ny hetsika.
vendredi, 19 octobre 2018 18:48
Antsirabe: Efa gadra any am-ponja mbola mahavita aferam-basy
Nahitam-bokany ny hetsika nataon’ny polisim-pirenena teto Antsirabe nandritra ny 10 andro teo ho eo.
Basy poleta vita gasy iray niaraka tamin’ny bala niisa 10 no sarona teo Ampiaviana tamin’ity hetsika ity raha ny nambaran’ny Kaomisera Patrick.
Raha ny fanazavany ihany dia lehilahy iray antsoina hoe Rafama no tompon’ny ketrika ka any am-ponja mbola mamita sazy izy no manao ny afera amin’ny alalan’ny serasera amin'ny finday ary miantso ny olona mitondra ny basy sy manoro ny olona hivarotana izany, saingy izao sarona izao.
vendredi, 19 octobre 2018 18:18
Fihaonana Nanisana: Tsy nipoitra ny governemanta sy ny HCC
Ankoatra ny CENI dia miatrika ny fihaonana iarahana amin'ireo kandida filoham-pirenena ny Bianco, SAMIFIN ary koa ny vaomiera mpanamarina ny famantsiam-bola ny fiainana politika.
Tsy nipoitra ihany koa ny Kandida vitsivitsy.
Nanisana: Fihaonan'ny CENI amin'ireo kandida filoham-pirenena
Tanterahina izao hariva izao eny amin'ny efitrano fivorian'ny CENI Nanisana ny fihaonana mivantana eo amin'ireo kandida filoham-pirenena sy ireo mpikambana ao amin'ny CENI.
Alefa mivantana amin'ny haino amanjerim-panjakana (TVM/RNM) ny fihaonana. Mandeha ihany koa amin'ny radio Antsiva.
vendredi, 19 octobre 2018 13:52
Bakalorea 2018: 47,47% ny taham-pahafahana ho an'Antananarivo
Nivoaka androany ny voka-panadinana bakalorea ho an'ny faritanin'Antananarivo.
44,48% ny taham-pahafahana tamin'ny 2017.
vendredi, 19 octobre 2018 10:02
Alaotra Mangoro: Mitohy ny asan-dahalo na teo aza ny hetsika MANDIO
Lasibatra ny Kaloara tao amin'ny Kaominina Imerimandroso, omby sivy no lasan'ny dahalo. Ny valan'omby efa mivoha midanadana no nanaitra ny tompon'omby.
Voatafika ihany koa ny tany amin'ny Kaominina Vohimena, Distrika Amparafaravola, ary ombin'ny Ben'ny Tanàna no lasa.
Tsy nahavaha olana ve ny hetsika MANDIO ?